वर्ब कपका मैचहरू कसरी हाम्रो उबन्टुमा हेर्नुहोस्? | लिनक्सबाट
कसरी विश्व कप खेलहरू हाम्रो उबन्टुमा प्रत्यक्ष हेर्न?
अलेक्ज्याण्डर (उर्फ KZKG ^ Gaara) | | aPLICACIONES, फाईललिटको UseLinux
P2PTV अडियोभिजुअल सामग्रीको वास्तविक समयमा प्रसारण र प्रसारणको लागि एक प्राविधिक हो (भिडियोहरू, टेलीभिजन, आदि) प्रणालीहरूको वास्तुकलाको प्रयोग गरेर इन्टर्नेट नेटवर्क मार्फत P2P, जहाँ व्यक्तिगत नोडहरू प्राप्त गर्न अन्य नोडहरूमा जडान हुन्छ स्ट्रिमहरू भिडियो र अडियो प्रयोग गर्नु भन्दा सर्भर केन्द्रीय, आईपी आधारित टेलिभिजनमा जस्तै (आईपीटीभी).
मैले चयन हेर्न के चाहिन्छ?
खैर, सबै भन्दा पहिले, तपाइँ के गर्न छ एक पृष्ठमा जानुहोस् जहाँ लाइभ प्रसारण सूचीबद्ध छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय एक हो rojdirecta.orgपृष्ठको मुख्य बक्सले दिनको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण खेलहरू सूचीबद्ध गर्दछ। म सुझाव दिन्छु कि यस विषयको साथ आफैंलाई परिचित गर्न तपाईले केहि क्लिक गर्नुहोला कि विकल्पहरू खोल्नका लागि। चाँडै, तपाइँ बुझ्नुहुनेछ कि प्रत्येक खेल बिभिन्न संस्करणमा उपलब्ध छ। अर्को शब्दमा, त्यहाँ खेलहरू छन् जुन P2P स्तम्भले "होईन" र अन्यमा यो "P2P" भन्छ। यसको मतलब यो हो कि ती "NO" ले फ्ल्याश मार्फत हेर्न सकिन्छ, मिमि (यो टोटेमको साथ मात्र हेर्न सकिन्छ यो लिंकमा क्लिक गरेर), आदि।
यस लेखमा, म तपाईंलाई व्याख्या गर्न चाहान्छु "P2P" भन्ने मानिसहरूलाई कसरी हेर्ने। तपाई त्यो जाँच्दै हुनुहुन्छ कि "प्रकार" स्तम्भमा उनीहरूको मानहरू फरक-फरक छन्: कोहीले "सोपकास्ट" भन्छन्, अरूले "भिटल", र यस्तै। P2ptv हेर्नका लागि यी फरक प्रणालीहरू छन्। यस अवस्थामा, मैले सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक छनौट गरें: SopCast।
त्यसो गर्न पहिलो कुरा त हो एक SopCast ग्राहक डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्। उबन्टुमा यो एकदम सजिलो छ।
पहिले हामी यो थप्छौं PPA संवाददाता:
sudo add-apt-repository ppa: जेसन-स्किमुनमान / ppa
त्यसपछि हामी अपडेट गर्दछौं:
प्रोग्राम स्थापना गर्नु अघि, तपाईंले sp-auth प्याकेज स्थापना गर्नु पर्छ, जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। अन्तमा, हामी Sopcast प्लेयर स्थापना।
sudo apt-get sopcast- प्लेयर स्थापना गर्नुहोस्
यदि तपाइँ फेडोरा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ RPM डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ.
एक पटक प्रोग्राम स्थापना भएपछि, हामी यसलाई पहुँच गर्न सक्दछौं: अनुप्रयोगहरू> अडियो र भिडियो> Sopcast प्लेयर। यद्यपि यो बाटो खोल्न आवश्यक छैन। अब देखि जब हामी सोपकास्ट लिंकमा इन्टरनेट ब्राउजरको साथ क्लिक गर्दछौं, प्रोग्राम स्वचालित रूपमा खोल्नेछ र भिडियो प्ले हुनेछ।
त्यसोभए आउनुहोस् rojdirecta.org, हामी हालको स्ट्रीमि is भएको खेलको लागि हेर्छौं र हेर्छौं कि तपाईंसँग सोपकास्ट मार्फत हेर्ने विकल्प छन। यदि तपाईंसँग यो विकल्प छ भने, हामी लि on्कमा क्लिक गर्दछौं, हामी फायरफक्सलाई सोपकास्ट प्लेयरसँग खोल्न भन्छौं र हामी कार्यक्रमलाई आवश्यक बफरि do गर्न केही बेर पर्खन्छौं।
दिमागमा राख्नको लागि यहाँ अन्तिम दुई सिफारिसहरू छन्: एक पटक तपाईंले सोपकास्ट-प्लेयरको साथ भिडियो खोल्नुभयो र यो प्ले गर्न थाल्छ, भिडियो सुरुमा अलि खराब देखिन सक्छ। यसले केही समय लिन्छ जबसम्म यो सभ्य बफरि reaches (+% ०%) मा पुग्दैन त्यसैले यो सबै समयमा अडिदैन वा सबै पिक्सेलित देखिन्छ। त्यसो भए, थोरै धैर्यता जुन पहिलो -०-90० सेकेन्ड पछि तिनीहरू राम्रो देखिन्छन्। दोस्रो सिफारिश निम्न हो: हाल खेलिरहेका खेलहरूको लागि हेर्नुहोस् (प्रत्यक्ष): यदि यो साँझ3छ र तपाईं बिहान प्रसारित खेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यो काम गर्दैन। यो केवल वास्तविक समयमा खेलहरू हेर्नका लागि हो (प्रत्यक्ष)।
अन्तमा, तिनीहरूको सत्यलाई निम्न सत्यहरूमा कल गर्नुहोस्: sopcast ले टिभी अनलाइन हेर्नको लागि अन्य विधिहरू प्रतिस्थापन गर्दैन (फ्ल्यास, mms, आदि)।। यदि खेल एमएमएस मा उपलब्ध छ, त्यसपछि मिम्स प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं फ्ल्यासको माध्यमबाट देख्न सक्नुहुन्छ, फ्ल्यास प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको सम्भावनाहरूको दायरा विस्तार गर्न यो अर्को विकल्प हो।
Justin.tv (फ्ल्यास) भिडियोहरू काम नगरेको बेला यो विश्व कपको खेलहरू हेर्न उपयोगी हुने छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » कसरी विश्व कप खेलहरू हाम्रो उबन्टुमा प्रत्यक्ष हेर्न?
तपाईंको म्यानुअल काम गर्दैन। प्रोग्राम स्थापना गर्दा यो भन्छ:
sopcast- प्लेयर: निर्भर गर्दछ: sp-auth (> = 3.0.1) तर स्थापना गर्दैन
मैले कसरी विन्डोजहरू छुटेछु जब यो हुन्छन् !!
HANSLOOP लाई जवाफ दिनुहोस्
उफ्! तपाईं सही हुनुहुन्छ, मैले त्यसलाई थप्न बिर्सनुभयो। Sopcast स्थापना गर्नु अघि तपाईंले sp-auth स्थापना गर्नु पर्छ। ध्यान दिनुहोस् कि मैले भर्खरै पोस्ट सच्याएको छु। जे भए पनि, तपाईं त्यो प्याकेज यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ: http://code.google.com/p/sopcast-player/downloa...
तपाईं उबन्टु ट्वीक प्रयोग गरेर सोपकास्ट स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ!
म आशा गर्छु कि म सहयोगी भएको छु! अंगालो! पल।
लिनक्समा कसरी विभाजन माउन्ट गर्ने
जिम्प २.2.8: अब के हो ...